I-Playalinda, ibhishi labanqunu eFlorida | Izindaba Zokuhamba
I-Playalinda, ibhishi labanqunu eFlorida
Uma esikufunayo kungukuhambela i- ulwandle olunqunu par ubuhle eFlorida, lapho-ke kufanele sibhekise amabombo ePlayalinda.
Yebo, lapha izidumbu ezibunjiwe azishiyelwa emcabangweni, empeleni abantu bacwebe nqunu ngokuphelele. Into ehlekisayo ukuthi iningi lababekhona kungabesilisa, noma kunjalo olwandle akusona isitabane.
isithombe isikweletu: chadmiller
Kubalulekile ukusho ukuthi ungangena olwandle kusukela ngo-6 ekuseni futhi ungachitha usuku lonke kulo, kuze kube ngu-8 ebusuku. Kuyamangaza ukuthi u-Playalinda kwesinye isikhathi uhlala evaliwe Kungani? Yebo, ngoba isendaweni efanayo neKennedy Space Center. Le yindlela okwethulwa ngayo irokhethi ukungena kwabantu akuvunyelwe.
isithombe isikweletu: dms_1st.isithombe
Yini enye esiyaziyo ngaleli bhishi? Well, ngaphezu ukushuka nqunu ngokuphelele, ungaphinda ushayele igagasi. Yebo, leli ngelinye lamabhishi athandwa kakhulu ngabazulazula kule ndawo.
isithombe isikweletu: GrahamIX
Kufanele sikwazise ukuthi ukungena olwandle kufanele ukhokhe umnyango omncane onentengo yama- $ 3 dollars. Amanye amathiphu esingakunika wona ukuletha amanzi nesemishi uma kwenzeka ulamba ngoba kuleli bhishi akuthengiswa ukudla neziphuzo.
Noma ngabe ikuphi, noma ngabe unesibindi sokugcoba ilanga unqunu noma cha, i-Playalinda ngokufanayo yinto engalibaleki. Usuvele uyazi, ohambweni lwakho olulandelayo oluya e-United States, qiniseka ukuthi uvakashela le ndawo enhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ukuzilibazisa » I-Playalinda, ibhishi labanqunu eFlorida
Amabhishi aseCassis, isihlabathi nedisco endaweni eyodwa